Home Wararka Gudaha Xog: Sidee Rooble uga war helay qorshaha guddiga FEIT kahor inta aanu...
Xog: Sidee Rooble uga war helay qorshaha guddiga FEIT kahor inta aanu kala dirin?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kala diray guddiyaddii doorashada dadban ee dalka ka dhacday, kadib markii uu ka war helay qorshe uu damacsanaa guddiga FEIT.
Sida ay ogaatay Caasimada Online guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa qorsheynayey iuuu xalay soo saaro go’aan lagu fasaxayo kursiga #HOP086 ee Fahad Yaasiin oo horay guddigaan iyo xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo is-kaashanaya ay doorashadiisa u hakiyeen.
Sida ay ogaatay Warabahinta Radio Halgan 📻 waxaa heshiis qarsoodi ah uu dhex-maray xubnaha guddiga iyo ergo ka socotay Fahad Yaasiin, si kursiga loo fasaxo, taasi oo Rooble soo istaajin laheyd meel adag.
Waxaa suurta-gal ah in dad badan ay is-weydiiyaan sida lacag sidaas u badan loogu bixin karo kursi xildhibaan, balse muhiimadda ayaan aheyn kursiga ee waa xasaanadda uu leeyahay.
Waxaa xusid mudan in doorashadii 2016 ay xildhibaano badan oo badankood kasoo jeeda beesha Hawiye ay kuraas xildhibaan ku bixiyeen lacag ka badan nus milyan dollar, si ay ugu helaan xasaanad uguna ilaashadaan ganacsiyo iyo qanadaraasyo ay ka hasytaan dowladda.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, heshiiska qarsoodiga ah ee guddiga iyo Fahad ayaa waxaa ra’iisul wasaaraha usoo dusiyey xubno ka mid ah guddiga oo ku dhow, taasi oo keentay go’aankii deg degga ahaaa ee uu xalay ku kala dirau guddiga.
Kursiga #HOP086 ayaa waxaa horey ugu fadhiyey oo weli damac uga jira inuu dib u helo Faarax Cabdulqaadir oo ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh, mana cadda haddii tallaabada uu xalay qaaday Rooble ay arrintaas qeyb ka tahay.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhalatay doorashada Somaliland
Next articleQaar ka mid ah xildhibaanadii lacagta qaatay doorashadii Xamar oo lagu dhegan yahay
Laba dhinac oo saameyn xoog leh ku leh magacaabista ra’iisul wasaaraha...
Madaxweyne Xasan Shiikh oo hindise shaqo abuur ku dhawaaqay